Okwun’akuko – Igbo Services
Chigo	 May 15, 2022 0
Ogologo ahịrị mmanụ ụgbọala ga-akwụsị n’oge adịghị anya –…
M ga-akụ n’ala ma ọ bụrụ na a họpụtara m- Osibanjo.
Osote onye isi ala Naijiria, Prof. Yemi Osinbajo na-ekwu na ọ ga-eti mkpu site n'ụbọchị mbụ ma ọ bụrụ na a họpụtara ya ịbụ onyeisi ala na 2023. O kwuputara nke a n'ụbọchị Tọzdee oge ya na ndị nnọchiteanya APC na ndị isi ọdịnala na…
FEMA na ndị ọrụ mmepe na-arụkọ ọrụ iji gboo idei mmiri.
Ụlọ ọrụ Federal Capital Territory Emergency Management Agency, (FEMA), kpọrọ oku ka ha na Federal Capital Development Authority, (FCDA) na-emekọ ihe ọnụ iji dozie idei mmiri na FCT. Onye isi ụlọ ọrụ FEMA, Abbas Idriss kpọrọ oku a…
Onye odeakwụkwọ ukwu UN kwughachiri nkwa maka ọdịmma ndị ihe metụtara.
Onye odeakwụkwọ ukwu UN kwughachiri nkwa maka ọdịmma ndị ihe metụtara. Onye odeakwụkwọ ukwu nke United Nations, Mr Antonio Guterres ekwughachila nkwa UN iji hụ maka ọdịmma ndị Boko Haram metụtara na ndị ha chụpụrụ n'ime obodo na…
Kedu ihe Diala?
Chigo	 Apr 23, 2022 0
Kedu ihe bụ Diala? ." Diala bụ onye nwere onwe ya n'ala Igbo nke na-ekere oke . N' akụkọ ndị nna nna ya, dịala bụ ndị na-emetọghị onwe ha, na ndị nweere onwe ha n'ihi na achụghị ha àjà nye chi ma ọ bụ Arusi.
Kedu ihe bụ OSU Igbo?
Kedu ihe bụ OSU Igbo?Osu Caste System bụ ihe ochie n’ala Igbo nke na-akụda mmekọrịta mmadụ na ibe ya , n’alụmdi na nwunye. Osu bụ ndị achụpụrụ achụpụ. Nke a bụ n'ihi na ha na-arara ndị Osu a nye ndị Alusi (chi) wee si otú a na-ahụta…
Gịnị Ka Ndị Mmadụ Na-eme?
Chigo	 Apr 17, 2022 0
Ọtụtụ Ndị Kraịst n'ụwa niile na-eji mmemme ụka pụrụ iche, egwu, ọkụ kandụl, ifuru na mgbịrịgba nke ụka na-eme Ista. A na-eme mmemme Ista na mba ụfọdụ dị ka Philippines na Spen. Ọtụtụ Ndị Kraịst na-ele Ista anya dị ka oriri kachasị ukwuu…
Gịnị bụ ezi ihe Ista pụtara?
Ista, nke a na-akpọkwa Pascha (Aramaic, Greek, Latin) ma ọ bụ Sunday mbilite n'ọnwụ, bụ ememme Ndị Kraịst na ememe omenala nke na-echeta mbilite n'ọnwụ Jizọs, nke a kọwara n'ime agba ọhụrụ dịka o mere n'ụbọchị nke atọ nke olili ya mgbe a…
Ihe Igbo n’asọ n’oge gboo.
Chigo	 Apr 16, 2022 0
Ndị Igbo bụ ndị otu agbụrụ bi na ndịda ọwụwa anyanwụ Naijiria. N'oge ochie, a na-emegharị iwu na nkwenkwe iji mee ka ịdị ọcha nke ala dị ọcha ma ghara ịkpata iwe nke chi.Eke (python)Eke bụ ihe dị nsọ n'ala Igbo, e kwesịghị igbu ya ma ọ bụ…
Gịnị ka Ndị Kraịst na-eme na Saturday dị nsọ?
Ọ bụ ụbọchị mwute na ọṅụ n'etiti Ndị Kraịst n'ọtụtụ obodo. Ọtụtụ ụka na-eme mmemme nchegharị Ista. Mkparịta ụka gbasara ihe dị n'azụ emume, ekpere na akara ndị bụ akụkụ nke nchegharị Ista na-eme n'oge ọrụ ndị a. Ụfọdụ ụka na-emekwa nnukwu…
Izu ụka dị nsọ.
Izu ụka dị nsọ, n'ime ụka Ndị Kraịst, izu dị n'etiti Palm Sunday na Ista, ejiri emume pụrụiche mee dị ka oge nraranye na mmasị nke Jizọs Kraịst. N’akwụkwọ okpukpe ndị Gris na ndị Rom, a na-akpọ ya izuụka ukwu n’ihi na Chineke mere nnukwu…